Ngo-November, Spain izimo zezulu zifane kwentwasahlobo ezweni lethu. Heat ngokushesha siyaphela, futhi ilanga liqala ukuxoxa kancane. Kulabo abathanda iholidi beach, akudingeki ukuba iya kuyo e-Spain. Nokho, labo izivakashi abafisa vakashela ezikhangayo zomlando, imicimbi yamasiko kanye ukuhamba emigwaqweni nge flavour eliyingqayizivele futhi emoyeni, ungakwazi ukujabulela ubuhle ezweni ngalesi sikhathi sonyaka. Spain ngoNovemba - iyindawo ephelele yokuchitha isizungu romantic. Encwadini le sizoxoxa ngalokho ukwenza izivakashi ekwindla eSpain kanjani uhambo lwakho.
Isimo sezulu eSpain ngo-November
Sunny izinsuku kule nyanga, impela kancane. Ziyanda lina kulo lonke leli zwe. Uma ukholelwa ukuthi ababikezeli bezulu, November ungajabulisa abahambi zonke izinsuku eziyisishiyagalolunye noma abayishumi kwelanga. Ngaphezu imvula, ogwini umoya onamandla. Futhi zokugcina - lena isici esiyinhloko we-Spanish kwekwindla. Lokhu kusebenza ikakhulukazi emadolobheni asogwini. Ngakho, isimo sezulu e-Spain ngoNovemba, kuqhathaniswa abandayo (Yiqiniso, uma kuqhathaniswa evamile ukushisa kwehlobo). Izibuyekezo zibonisa ukuthi, ngenxa okushisa aphansi namanzi abandayo ogwini iholidi kusuka kube nzima kakhulu ngalesi sikhathi sonyaka. Umoya nendlu yaqala ukufudumala kancane.
Lokushisa in Spain, Novemba
kwekwindla lapha Amazinga okushisa emini ongafinyelela 15-17 ° C. Ngokwesibonelo, e Madrid, lezi zibalo ngandlela-thile aphansi. Ngokuvamile kusukela degrees 14 emini futhi babalelwa ku-6 ebusuku. ingxenye eseMpumalanga enyakatho ntshonalanga yeSpain inikeza lokushisa izinkomba efanayo, futhi lapha Ngasenyakatho ukubanda kakhulu ngenxa yemvula njalo iziphepho olwandle. Ngokuhamba ezifundazweni eziseningizimu nawo abusa zasezindaweni nomoya esindayo. Ngo sezulu libalele, yebo, izinga lokushisa lingase ukufinyelela 19 degrees Celsius. Nokho, lokhu akwenzeki njalo. Amanzi ogwini ngezinye izikhathi lifudumeza kuze kube degrees 20, kodwa ngenxa jikelele air lokushisa nomoya olwandle, njengoba kushiwo ngenhla, ogwini akuyona waphumula. Ogwini, izivakashi emakamu ahlale nalutho ngaphambi kokuqala kwesizini ezayo, elinde ehlobo. Kulesi simo, abantu abalisebenzisayo eziQhingini zaseCanary izivakashi ukufudumala ngesasasa nangokuqiniseka induduzo ethile, njengoba kukhona sezulu okukhulu unyaka wonke.
Labo nenhlanhla eyanele yokuthenga izinkambo eSpain ngo-November, bangase babe nomuzwa wokuthi kulesi thuba lokuphumula izobiza kubo izikhathi cishe eziningana eshibhile uma iqhathaniswa ihlobo noma ekwindla amanani. Ungakwazi kakhulu imali ku yokuhlala nehhotela amasevisi. Ngokusho Izibuyekezo zezivakashi, ukudla kulesi sikhathi futhi izindleko ezishibhile. Lesi simo kungenxa yokuthi ihlobo zokudlela eziningi izihambi, ngokulandelana, uma kuqhathaniswa isizini efudumele, ukuwa cishe lapho, ngoba iIgama izikhungo silindele zonke isivakashi. amanani Abanikazi ezansi ukudla, ngakho ngizama "ukuyenga" zezivakashi namanje uthanda amaholide eSpain ngo-November.
Ngokwesibonelo, ukudla okuphelele kungamenza alahlekelwe 10 nje-euro (ngesikhathi, ngo-July isethi efanayo izitsha kungadingeka akhokhe 15 euro). Ngakho-ke, ungasebenzisa lezi zimo ukuchitha iholide kuleli zwe futhi uzizwe nenduduzo esiphezulu. Isimo Sezulu Ngeke ayeke wena sizungeze umuzi noma imicimbi yosikompilo. Kuyaphawuleka ukuthi amanani imisebenzi eyisisekelo emadolobheni Bayefana bonke zonyaka. Uhambo e Madrid abasakwazi eqolo (Inani lentengo - 25 euro), umnyango Museum kungadla mayelana 7-12 euro. Uma ungafuni ukuhamba uhambo oluzungeza umuzi, kwase kuba kwabayishumi ezikhangayo esemqoka, ungakwazi ukugibela izinto zokuhamba zomphakathi. yokugibela esijwayelekile - 2-euro.
Yini ukubona eSpain ngo-November?
Spain neze buthuntu Novemba, futhi liqinisekisa leli - izibuyekezo, uvakashele lapha. Ngalesi sikhathi sonyaka lapha kufika inqwaba intsha futhi izakhamuzi esezikhulile, abazazisayo intengo yokuhlala nenduduzo sokuhamba. A ziyinto ethandwayo hambo ezihlukahlukene, iminyuziyamu nasemakhonsathini. Granada - endaweni bendabuko jazz festival, futhi Sevilla - International Film Festival. Ngaphezu kwalokho, kuba ukuqala Novemba eSpain - lena iholide Sosuku iminqumo, okuyinto zonke izivakashi ofika kulesi sikhathi, ukuvakashela.
Novemba 9 eSpain siqale ukugubha uSuku iminqumo. Lo mcimbi bendabuko, ikakhulukazi esifundeni Andalusia nomuzi Baena. Izinsuku ezimbalwa ezalandela kukhona isikhathi lezi zindawo wemikhosi, nemibukiso SMME. Le ndawo - omunye wabaholi ekukhiqizeni seminqumo. Uzoba kunzima ukumelana yokunambitha uwoyela iqhaza imikhosi ehlukahlukene. Uma izivakashi uthole nohambo, lapho betshelwa singawuhlakulela kanjani, ukuqoqa nokulungisa iminqumo. Ungafunda izimfihlo kanjani ukukhiqiza amafutha. Ngemva komkhosi iminqumo, ngeke bahlala banganandaba lo mkhiqizo. Ngenxa yalesi yaseSpain ingenye tavelonkhe ukuthi feeds enkulu yezwe ithela kuwo.
Madrid ekupheleni kwekwindla
Njengoba ubona, ngesisekelo okungenhla, izivakashi abajabulela yokuchitha isizungu kwamasiko, efana Spain ngoNovemba. Amanani for a holiday isabelomali ukuthi ngeke ukhohlwe isikhathi eside. Madrid - iyathinteka. Kulapha uzokubona zonke ezikhangayo (okuyinto impela eningi) e isimo esizolile, ngaphandle abaphethwe ukushisa kwehlobo.
Madrid kwekwindla buya omunye izikhungo isiko European. Capital - iyona nendawo Autumn Ubuciko Festival, lapho ungakwazi ukujabulela ukusebenza umdanso, yaseshashalazini, isekisi nomculo amaqembu ezingxenyeni ezihlukahlukene Earth. Imisebenzi nasemakhonsathini agcinwe ikakhulukazi ezindaweni ezisemadolobheni. Ngokuvamile, le nkundla izigaba. Izivakashi emkhosini futhi khona ukusebenza ezihlukahlukene bese uya igalari, ngaphezu, kunemihlangano osaziwayo nabaculi.
Njengoba Spain ngoNovemba ayinayo iholidi beach, uma usukhathele ukuhamba sezulu cool, ungakwazi ukuya ukusebenza eRoyal Opera House. Labo abaye wavakashela lapha, baxwayisa ngokuthi kungcono ukubhuka amathikithi noma ukuthenga kubo nge-Internet. Banyathelisa futhi akhokhe ezikhumulweni waseshashalazini, pos amakamelo enikeziwe ngokukhethekile.
Ngaphezu kwalokho, ekuqaleni kuka November (izinombolo 9) Abantu Madrid Ukugubha ongumvikeli edolobheni - Our Lady of Almudena. Ngalesi sikhathi, ungakwazi ukubuka mbukiso, emikhosini, umdanso nomculo izenzakalo. Futhi e Madrid, kulezi zinsuku lweviki iqala ukubukela amabhayisikobho zokuhlola, futhi Alcala de Henares, esemgwaqweni eziseduze - Ezinsukwini Lokuhlawulelwa lwaminyaka yonke ifilimu umkhosi.
Isimo sezulu e Madrid
amazinga okushisa sezifika 13 degrees Celsius. Ngakho-ke kungcono ukugqoka izingubo ezifudumele. Uma ilanga lifudumeza emoyeni, kungaba ifike degrees 20. abahambi ongumpetha bathi ebusuku kubanda ikakhulukazi, ngakho ukuletha ibhantshi ukuze baphumule. Ngaphezu kwalokho, isimo sezulu kungaba ngokuvamile eyayibizwa ngokuthi imvula, yingakho kungcono uthathe isambulela sishaywe bese uzama ukugqoka izicathulo ukuthi ungatholi ezimanzi.
Where to eat e Yaroslavl esihlwabusayo engabizi? Izithombe kanye nokubuyekeza
"Utrish Small" - isizinda. indlu Guest "Utrish Encane"
Darnytskyi esifundeni Kiev. Kiev District: Svyatoshinsky, Dneprovskiy, Solomenskiy
Izakhiwo kanye amakhemikhali amanzi.
Ikhaya ukuwafaka: Don isaladi ebusika
Kanjani ukuze uthole ngezenzo: izinyathelo kuqala
Izinhlobo sokuzivivinya ngoba metal, izinkuni kanye ukhonkolo. Izinhlobo sokuzivivinya nenjongo yabo